Ny Fahasarotan’ny Fitadiavana Fandriampahalemana Miaraka amin’ny M23 any RDC · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2012 8:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Français, عربي, English
Ahiana hiitatra na dia eo aza ny ezaka iraisampirenena hampisy ny fiatoan'ady eo amin'ny mpioko M23 sy ny governemanta Kôngôley ny fifanandrinana misy ankehitriny any amin'ny faritra Kivu ao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kongo (DRC). Sarotra ny manadihady ity kinovan'ny taona 2012 amin'ity fifandirana ity, indrindra moa fa hetsika mitam-piadiana mora miova, toerana [itobiana] sy politika, ny M23. Mifandimbindimby mitarika ny lehibe ao aminy, ary eo ambany ambaindain'ny hery vahiny mitsiriritra ny loharanon-karena ao amin'ny faritra ny hetsika.
Iza marina moa ireo mpiokon'ny M23 ireo? Izany ny fanontaniana tian'ny Tetikasan'ny Umasala ao amin'ny Rift Valley Institute hovahàna ao amin'ny tatitra nataony “Hatramin'ny CNDP mandra-pahatongan'ny M23: ny fivoaran'ny hetsika mitam-piadiana ao Kôngô atsinanana” (PDF). Raha mora faritana ny sampana mitam-piadianan'ny mpioko dia sarotra azo kosa ny fitarihana politika eo aminy. Manazava ihany koa ny tatitra :
Raha mbola kitoatoa tamin'ny voalohany ny paikam-pifandraisan'ny mpioko M23 amin'ny vahoaka, nihatsara sy nihamandroso fatratra izany ka nanjary nahazoany ny fanohanan'ny vahoaka. Ao amin'ny Jeune Afrique i Trésor Kibungula no mandravaka ny fivoaran'ny M23 ao amin'ny Facebook [fr], tahaka ny mbola menamenatra kely tamin'ny voalohany tamin'ny volana jolay, mandra-pahatonga azy ho sehatra mampiady hevitra loatra ka nahatery ny Facebook hanakatona azy
Ny tafatafa nifanaovana tamin'i Bertrand Bisimwa avy ao amin'ny M23 hita ao amin'ny bilaogy Congo Siaisa no manampy hanazavana ny fiandohan'ny hetsika sy ny lazainy ho tanjona hotratrariny :
Efa nifampitafatafa tamin'ny mpanao gazety ihany koa ny Jeneraly Sultani Makenga, mpitarika ara-miaramilan'ny M23 izay niresahany ny fiovaovan'ny mpitarika ny hetsika M23 [fr], izay nilazana ny satan'ny mpitarika ny CNDP teo aloha Laurent Nkunda sy ilay jeneraly voasambotra Bosco Ntaganda ao anatin'ny hetsika.
Ankilan'ny fitarihana mikorotandrotana, Melanie Gouby ao amin'ny gazety-boky Newsweek manazava fa tsy manana foto-kevitra politika voafaritra mazava ny hetsika ary sintonin'ny tombontsoa ara-politika sy toe-karen'ny firenena manodidina.
Ny firenena roa manana tombontsoa politika sy toekarena indrindra dia i Rwanda sy Ogandà. Araka ny Firenena Mikambana, efa hatry ny ela i Rwanda tafiditra amin'ny ady any Kivu, na dia eo aza ny fandavan'ny fitondran'ny Filoha Paul Kagame. Nefa kely dia kely ny fisalasalana amin'izany fanohanan'ny Rwanda araka ny fanazavan'ny tetikasa Usamala :
Momba ny anjara toeran'i Rwanda momba ity krizy ity, tsy azon'ny mpanara-baovao maro ny politikan'i Etazonia manamaivana ny sazy ampiharina amin'ny fitondrana Kagame.
Ahiahiana ho nampitao tamin'ny fahafihan'ny M23 farany teo ihany koa ny governemanta Ogandey. Ao amin'ity video manaraka ity, mangataka fanazavana momba ny fifandraisana amin'ny M23 amin'ny filoha ny depiote ogandey :
Mbola tsy mazava tsara ny toe-draharaha noho ny fisian'ny mpandray anjara maro amin'ity krizy ity. Niala tanteraka an'i Goma ve ny M23? Misy ny sasantsasany amin'ny M23 tahaka ny mino tanteraka fa hiverina ao an-tanàna tsy ho ela ry zareo. Tsy dia manantena loatra amin'izay fifanaraham-pifanarahana momba fandriampahalemana ny mpanara-maso.
Gérard Prunier, Frantsay mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo sy mpanoratra, mandresy lahatra fa “zary milalao miandry fotoana fotsiny mandra-pivoaka mazava ny toe-draharaha” i Kôngô sy Rwanda. Mino izy fa mety hisy ny fiitaran'ny krizy :
Mandritra izany fotoana izany, ny mponina ao an-toerana no mizaka voalohany indrindra ny vokatr'ity ady tsy mana-pahataperana ity. Nitatitra ny Programme Alimentaire Mondial na ny World Food Programme fa rfarafahakeliny 80000 ny isan'ny olona nafindra toerana any amin'ny faritra :
Vatsian'ny International Security Network (ISN) ity lahatsoratra (teny anglisy) ity sy ny dikantsorany amin'ny teny frantsay, arabo ary espaniola ho fiaraha-miasa amoahana ny feon'olo-tsotra eo amin'ny sehatry ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny filaminana ankapobeny. Tao amin’ny bilaogy ISN,no navoaka voalohany ny lahatsoratra ary azona jerena eto ireo tantara hafa mifandraika amin’izany.